Rickets (အရိုးပျော့သူငယ်နာ ) - Hello Sayarwon
Rickets (အရိုးပျော့သူငယ်နာ )
Dr. Hlaing Min Ko Ko မှ ရေးသားသည်။ 01/06/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Rickets (အရိုးပျော့သူငယ်နာ ) ကဘာလဲ။
အရိုးပျော့သူငယ်နာမှာ ကလေးများတွင် ဗီတာမင်ဒီ၊ ကယ်လ်စီယမ် သို့မဟုတ် ဖော့စ်စဖိတ်ဓါတ်များ အလွန်အမင်းချို့တဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အရိုးများကို ပျော့စေပြီး အားနည်းစေ၏။
Rickets (အရိုးပျော့သူငယ်နာ ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အရိုးပျော့သူငယ်နာမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ၌ အဖြစ်များသည်။ အသက် ၆ လနှင့် ၃၆ လကြားကလေးများတွင် အရိုးပျော့သူငယ်နာဖြစ်နိုင်ချေမြင့်မားသည်။ ထိုအရွယ်တွင် ကြီးထွားမှုအရှိန်မြှင့်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ နေရောင်နည်းသောဒေသများတွင်နေထိုင်ခြင်း၊ သားသတ်လွတ်စားခြင်း သို့မဟုတ် နွားနို့ထုတ်ကုန်များ မသောက်ခြင်းတို့မှ ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
Rickets (အရိုးပျော့သူငယ်နာ ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အရိုးပျော့သူငယ်နာ ၏ အဖြစ်အများဆုံး ရောဂါလက္ခဏာများမှာ
ကျောရိုး၊ တင်ပဆုံနှင့် ခြေထောက်များတွင် နာကျင်ခြင်း
အရိုးပျော့သူငယ်နာသည် အရိုးများကို အားနည်းစေခြင်းကြောင့် ကလေး၏ကြီးထွားမှုကို ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ ထိုမှ ပုံစံပျက်ခြင်းများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ဥပမာ…
ခြေခွင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဒူးနှစ်ဖက်အတွင်းသို့ကွေးနေခြင်း
လက်ကောက်ဝတ်နှင့် ခြေကျင်းဝတ် ကြီးခြင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အထဲမှာမပါဝင်သေးသော အခြားလက္ခဏာများလည်း ရှိနိုင်ပါသေးသည်။ အကယ်၍ကိုယ့်ဆီ၌ ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများ ရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုပါက ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
သင့်ကလေးဆီမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲမှ တစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုလျှင် သို့မဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုလျှင် ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်း၏ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုသည် မတူညီနိုင်ပါ။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Rickets (အရိုးပျော့သူငယ်နာ ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သင့်ကလေးတွင် ဗီတာမင်ဒီကို အစာနှင့်နေရောင်မှ ကောင်းကောင်းမရရှိလျှင် အရိုးပျော့သူငယ်နာဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ဗီတာမင်ဒီသည် အစာမှကယ်လ်စီယမ်နှင့် ဖော့စ်ဖိတ်ကိုစုပ်ယူရာတွင် ကူညီပေးသောကြောင့် အရိုးကျန်းမားရေးအတွက် အရေးကြီး၏။ ဗီတာမင်ဒီ၊ ကယ်လ်စီယမ်နှင့် ဖော့စ်ဖိတ်တို့ လုံလောက်စွာမရခြင်းက အရိုးပျော့သူငယ်နာကို ဖြစ်စေပါသည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် တစ်ချို့သောရောဂါများကြောင့်လည်း ဗီတာမင်ဒီကို အသုံးမချိနိုင်ဖြစ်စေတတ်ပြန်သည်။ ဥပမာ…
အရိုးပျော့သူငယ်နာမှာ မိဘများမှလည်း မျိုးရိုးလိုက်နိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ဆိုလျှင် ကလေးတွင် အထူးကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
ငါ့ဆီမှာ Rickets (အရိုးပျော့သူငယ်နာ ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အရိုးပျော့သူငယ်နာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသားအရေမည်းခြင်း – မည်းသောအရေပြားသည် ဗီတာမင်ဒီကို အထုတ်နည်း၏။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အမေ၌ဗီတာမင်ဒီချို့တဲ့ခြင်း – ဗီတာမင်ဒီအလွန်အမင်းချို့တဲ့သော မိခင်မှ မွေးသောကလေးသည် အရိုးပျော့သူငယ်နာမွေးကတည်းကပါလာခြင်း သို့မဟုတ် လအနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်လာခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မြောက်ပိုင်းလတ္တီကျုဒေသများ – နေရောင်အရနည်းသော နေရာများတွင် နေထိုင်သည့်ကလေးများ၌ အရိုးပျော့သူငယ်နာဖြစ်နိုင်ချေ များ၏။
နေ့မစေ့လမစေ့မွေးခြင်း – သတ်မှတ်ရက်ထက် စောမွေးသောကလေးများတွင် အရိုးပျော့သူငယ်နာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဆေးများ – အတက်ကျဆေးများ HIVဆေးများသည် ခန္ဓါကိုယ်၏ ဗီတာမင်ဒီသုံးနိုင်စွမ်းကို နှောက်ယှက်နိုင်ပါသည်။
မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းတိုက်ခြင်း – မိခင်နို့တွင် အရိုးပျော့သူငယ်နာကိုကာကွယ်နိုင်လောက်သော ဗီတာမင်ဒီပမာဏမပါရှိပါ။ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်သောကလေးများတွင် ဗီတာမင်ဒီဆေးရည်ပါ တိုက်သင့်ပါသည်။
ကယ်လ်စီယမ်နည်းခြင်း – အရိုးပျော့သူငယ်နာ ကလေးများတွင် တစ်နေ့လျှင် ကယ်လ်စီယမ် 300 mg (နွားနို့တစ်ခွက်စာ) အောက်လျော့နည်းပြီး ရရှိ၏။ အရိုးကျန်းမာစေရန်အတွက် ကြီးထွားနေသော ကလေးမှာ 400 mg (ကလေးပေါက်စများ) မှ 1500 mg (ဆယ်ကျော်သက်များ) နေ့စဉ်လိုအပ်ပါသည်။
အစားအသောက်ဆင်းရဲခြင်း – အလွန်အမင်းဆင်းရဲသော တိုင်းပြည်များမှ ကလေးများတွင် အစားအသောက် ကောင်းကောင်းမစားရခြင်းကြောင့် အရိုးပျော့သူငယ်နာဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မကုသပဲထားပါက အရိုးပျော့သူငယ်နာကနေ အောက်ပါတို့ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။
Rickets (အရိုးပျော့သူငယ်နာ ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ဦးခေါင်းခွံရိုး – အရိုးပျော့သူငယ်နာရှိသော ကေးလများသည် ပျော့သောဦးခေါင်းခွံရိုး ရှိတတ်ပြီး ပျော့နေသည့်အပိုင်း (ငယ်ထိပ်)များ ပိတ်ရန်နောက်ကျနေတတ်ပါသည်။
ခြေထောက်များ – ကျန်းမာသော ကလေးများတွင်တောင် ခြေခွင်တတ်ပါသည်။ အလွန်အမင်းခွင်နေခြင်းက အရိုးပျော့သူငယ်နာ၏ အတွေ့ရများသော လက္ခဏာတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
ရင်ဘတ် – အရိုးပျော့သူငယ်နာရှိသော ကလေးများ၌ နံရိုးမူမမှန်မှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ နံရိုးများပြားနေပြီး ရင်ညွှန့်ရိုးငေါထွက်ခြင်းကို တွေ့ရနိုင်၏။
လက်ကောက်ဝတ်နှင့်ခြေကျင်းဝတ် – အရိုးပျော့သူငယ်နာရှိသောကလေးများတွင် လက်ကောက်ဝတ်နှင့် ခြေကျင်းဝတ်တို့၌ ပုံမှန်ထက် ပိုကြီးနေသည်ကို တွေ့ရပါမည်။
အရိုးပျော့သူငယ်နာအားအတည်ပြုရန် ကူညီနိုင်မည့် စစ်ဆေးမှုများ –
Rickets (အရိုးပျော့သူငယ်နာ ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အရိုးပျော့သူငယ်နာရှိသောကလေးများအား အစာနှင့် နေရာင်ခြည်မှ ဗီတာမင်ဒီလုံလောက်စွာရရှိအောင် လုပ်ပေးရမည်။ မရနိုင်ပါက ကုသရာတွင် ဖြည့်စွက်ဆေးများ အသုံးပြုရပါသည်။ ကလေးအား တစ်နေရလျှင် ဗီတာမင်ဒီ 1000-2000 international units (IU) ပေးရမည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဆရာဝန်၏ကြီးကြပ်မှုအောက်၌ ပိုများသော ဗီတာမင်ကို ပေးရနိုင်သည်။ ကယ်လ်စီယမ်ကိုတော့ တစ်ရက်လျှင် 1000-1500 mg ကို ကယ်လ်စီယမ်ကြွယ်ဝသောအစာများ သို့မဟုတ် ဖြည့်စွက်ဆေးများမှ သောက်သုံးရမည်ဖြစ်သည်။
မျိုးရိုးလိုက်သော အရိုးပျော့သူငယ်နာများတွင် ဟော်မုန်းကျွမ်းကျင်သူနှင့် သေချာကုသရမည်ဖြစ်သည်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက အရိုးပျော့သူငယ်နာ ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အရိုးပျော့သူငယ်နာအား ကာကွယ်ရန် သင့်ကလေးအား ဗီတာမင်ဒီကြွယ်ဝသည်များ သို့မဟုတ် ဗီတာမင်ဒီ ဖြည့်စွက်စာများကို ဂရုစိုက်ကျွေးပါ။ ဥပမာ –
အဆီများသောငါးများ (ဆာမွန်၊ ဆာဒင်း၊ တူနာ)
နွားနို့- သို့သော် ဒိန်ချဉ် ချိစ်တို့လို နို့မှလုပ်သည်များ မဟုတ်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ရှိနေလျှင် ဗီတာမင်ဒီသောက်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
လူနို့ရည်၌ ဗီတာမင်ဒီအနည်းသာပါသောကြောင့် နို့တိုက်ကလေးများတွင် ဗီတာမင်ဒီ 400 mg နေ့စဉ်တိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အမေရိကန် ကလေးအထူးကု အကယ်ဒမီမှ နို့တိုက်သောကလေးများ သို့မဟုတ် တစ်နှစ်သားအောက် နို့ဖော်မြူလာကို 33.8 အောင်စ (တစ်လီတာအောက်) သောက်သူများ၌ ဗီတာမင်ဒီဖြည့်စွက်သောက်ရန် လမ်းညွှန်ထားပါသည်။
နေအလင်းနှင့်ထိတွေ့ခြင်းမှာ ဗီတာမင်ဒီရရန်အတွက် အကောင်းဆုံးရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။ အလင်းနှင့်ထိတွေသည့်အခါ အရေပြားမှ ဗီတာမင်ဒီထုတ်၏။ နေပူစာလှုံသည့်အခါတွင် ကလေးကို အဝတ်အစားဝတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် နေရောင်ခံလိမ်းဆေး လိမ်းပေးခြင်းများလုပ်ရန် မမေ့ပါနှင့်။ သို့သော် နေရာင်ခံလိမ်းဆေးမှာ နေရောင်ကိုတားလိုက်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် အကောင်းဆုံးမှာ မနက် ၇ နာရီမထိုးခင် နေပူစာလှုံခြင်းက ကလေးအတွက် အကောင်းဆုံးပင်ဖြစ်သည်။
Rickets. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rickets/home/ovc-20200467. Accessed August 11, 2016.
Rickets. http://orthoinfo.aaos.org/topic.cfm?topic=a00577. Accessed August 11, 2016.
Rickets. http://emedicine.medscape.com/article/985510-overview#a4. Accessed August 11, 2016.
Rickets. http://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/rickets/. Accessed August 11, 2016.
သင့် အရိုးများ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေဖို့